EX - ABSDF: ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံးသမတကြီးရဲ့ ပုံစံဟောင်းကားဟောင်းကို အာရတ်စော်ဘွားတယောက် ဒေါ်လာတသန်းပေးဝယ်မယ်လို့ကမ်းလှမ်း...
ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံးသမတကြီးရဲ့ ပုံစံဟောင်းကားဟောင်းကို အာရတ်စော်ဘွားတယောက် ဒေါ်လာတသန်းပေးဝယ်မယ်လို့ကမ်းလှမ်း...
ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲ့ဆုံးသမတကြီးလို့ အများသတ်မှတ်နေကြတဲ့ ဥရုဂွေးနိုင်ငံသမတကြီး ယိုဆေး မူယီကာမှာ ငွေလိုနေတယ်လို့ အာရတ်စော်ဘွားတဦးက ထင်မြင်စာနာတာကြောင့် လူအများအမြင်မှာ ချိုးခြံနိမ့်ချတဲ့သမတကြီးရဲ့ ပုံရိပ်စွဲထင်နေတဲ့ ၁၉၈၇ ပုံစံဟောင်း ဗောက်ဝဂွန်း လိပ်ခုံးကား ကလေးကို ဒေါ်လာ တသန်းပေးဝယ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။
ဒီကားလေးဟာ သူ့ရဲ့တခုတည်းသော တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုကြားသိတဲ့ မက္ကစီကိုသံအမတ်က ဒီငွေနဲ့ဆို လေးဘီစုံလည် ဆယ်စီးလောက်ရနိုင်တယ်လို့ အရွန်းဖောက်တော့၊ သမတကြီးက ငါကတော့ ကားတွေလဲ သိပ်စိတ်မဝင်စားပါဘူး၊ သိပ်အရေးကြီးတယ်လဲမထင်ပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုရင်တောင် ငါ့အတွက်ထက် ခြေသုံးချောင်းပဲရှိတဲ့ ငါ့ခွေးလေး မင်ညူလာအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။
ပျောက်ကြားသူပုန်ဟောင်း သမတကြီးဟာ နေတော့သူ့ဇနီးသည် အထက်လွတ်တော်အမတ် အမည်ပေါက်ပိုင်တဲ့ လယ်တောအိမ်လေးမှာနေထိုင်ပြီး သူရတဲ့လစာ တလဒေါ်လာ (၁၁၀၀၀) ထဲက သူလိုသလောက်အနည်းငယ်နဲ့ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းကို သူပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အသုံးပြုပြီး ကျန်ငွေအားလုံးကို ဆင်းရဲသာများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ လျူဒါန်းထားပါတယ်။
"သမတဆိုတာ အမြင့်ဆုံးရွေးကောက်ခံ စီမံဆောင်ရွက်ရေးဝန်ထမ်းဖြစ်တယ်၊ သူဟာ ဘုရင်မဟုတ်ဖူး၊ သူဟာနတ်ဘုရားလဲမဟုတ်ဖူး ပြီးတော့မှော်ဆရာ ပဉ္စလက်ဆရာမဟုတ်ဖူး။ သူဟာ လူထုရဲ့အလုပ် အကြွေးသာဖြစ်တယ်။ ငါ့ရဲ့ ဘဝနေထိုင်ရေးအယူအဆကတော့ ကိုယ်အလုပ်အကြွေးပြုမဲ့ လူများစုတွေလို နေထိုင်ကျင့်ကြံဖို့ပါဘဲ"။ ပြီးတော့သမတကြီးကဖြည့်စွက်ပြောတာက သူ့အတွက် တခုတည်းသော အလေးထားကျင့်ကြံမှုက မေတ္တာပါဘဲ တဲ့။
ခုလိုအာရတ်စော်သွားရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်သာ အဆင်ပြောသွားခဲ့ရင် ရလာတဲ့ငွေတွေအားလုံးကိုလဲ အိုးမဲအိမ်မဲ့တွေအတွက် အိမ်ယာစီမံကိန်းလုပ်ပြီး လျူဒါန်းသွာမှာဖြစ်ပြီး၊ တကယ်လို့ မက္ကစီကို သံအမတ်ကြည်စယ်သလို ကားတွေဖြစ်နေရင်လဲ နိုင်ငံတော်ရဲ့ လူထုကျန်းမာရေးဌာနနဲ့ သူပါတီရဲ့ မဲဆွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးဖို့လျူသွားမှာပဲလို့ဆိုတယ်။
ဗမာပြည်ကအရှက်မရှိ ကိုယ်ကိုကိုယ် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများလို့ပြောပြီး ဆင်းရဲသားတောင်သူ လယ်သမား အလုပ်သမားတွေရဲ့ အိုးအိမ်မြေနေရာတွေကို လုယက်ဖျက်ဆီးနေတဲ့သူတွေနဲ့တော့ ကွာချင်တိုင်ကွာ မိုးနဲ့မြေလိုပါဘဲ။ ဒီကြားကပဲ သူတို့မှာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်လို့ထင်ကြသေးတယ်။ သူတို့ရဲ့ မဟုတ်အယုတ်တွေကိုထောက်ပြရင်တရားစွဲထောင်ချချင်ကြသေးတယ်။
သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးပြောတာက " လူဟာ စွဲလန်းမှုသက္ကာယတွေနဲ့ အပြည့်ဖြစ်တယ်။ ရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုလိုလား နှစ်သက်စွဲလန်းတတ်တယ်။ ငါမှာလဲရှိတယ်။ ငါ့အဖေရဲ့ တူလေးတွေ လွှလေးတွေကို ငါခုထိ သိမ်းထားတုန်းပဲ။ ဒါမျိုလေးတွေက အသေးအဖွဲဆိုပေမယ့် လူတဦးတယောက်တော့ အလွန်အဖိုးထိုက်တန်နေတတ်ပါတယ်"။
'World's poorest president' gets $1mn offer for old VW Beetle
Published time: November 07, 2014 13:31
An Arab sheikh seems to think the 'world’s poorest president,' Uruguay’s Jose Mujica, is in dire need of cash. He’s offered $1 million for Mujica’s iconic 1987 VW Beetle – but the pot-smoking leader says he will donate the money to the homeless instead.
The president explained his decision by saying: "Human beings haveabit of fetishism; we need certain material symbols,” and added that he still keeps his father’s old hammer and shovel: "They are little things to the world, but are worthalot to you."
"A president isahigh-level official who is elected to carry outafunction. He is notaking, notagod. He is not the witch doctor ofatribe who knows everything. He isacivil servant. I think the ideal way of living is to live like the vast majority of people whom we attempt to serve and represent," he once told Al Jazeera.
As for addictions, the only one Mujica says matters is "love."